Olee otú Naghachi ehichapụ ozi ederede site na iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S / 4
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi ederede site na iPhone
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi ederede site na iPhone (iPhone 6s Plus gụnyere)
Mkpa !!! 2 Must Dos mgbe adịkwa ozi ederede na iPhone
1) Kwụsị eji gị iPhone ozugbo
Mgbe ị na mmadụ na mberede ihichapụ ozi na gị iPhone, ozi ederede adịghị n'ezie na-ehichapụ ozugbo. Kama, ha na-aghọ-adịghị ahụ anya na-eche na-overwritten site ọhụrụ data. Ya mere, ị kwesịrị ịkwụsị iji gị iPhone ozugbo mgbe ị na-ahụ na ị na-efu iPhone ozi ederede. Ihe ọ bụla ọzọ na ime on iPhone ga-eme ka ọ ghara ikwe omume iji weghachite ehichapụ ozi na iPhone.
2) Chọta a na kọmputa dị nso maka iPhone ozi mgbake
Ebe ọ bụ na ị na-apụghị ime ihe ọ bụla na gị iPhone, ị mkpa ịchọta a PC ma ọ bụ a Mac iji weghachite na-ehichapụ ozi ederede site na gị iPhone. Na mee elu mee, mma. Software nanị na-agba ọsọ na kọmputa nwere ike inyere naghachi ehichapụ ozi na iPhone. Ọ dịghị ngwa nwere ike ime ya ugbu a. Ọ bụrụ na ị na-ahụ otu onye, ​​ikpe ize ndụ nke ịdapụ gị iPhone data kpọrọ n'ihu na-eji ya.
Ịchọta ederede ozi na gị iPhone efu ma ọ bụ ehichapụ ozi ederede site na gị iPhone mmadụ na mberede? Nọgidenụ na-Chiefs on! Ị nwere ike idozi ya! Ma buru n'obi, mee elu mee mma n'ihi na ị ga-esi. Ma, i Aga mgbe ahụ ndị a na-ehichapụ ozi ederede ọzọ. Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone data mgbake) bụ ọkachamara iPhone ehichapụ ederede mgbake ngwá ọrụ na-agwa gị otú ị ga-esi azụ ehichapụ ozi na iPhone. Ọ na-enye gị 3 nhọrọ naghachi gị ederede ozi: naghachi ozi kpọmkwem site iPhone, wepụ iPhone ozi site na iTunes nkwado ndabere na mpaghara weghachite iPhone ozi ederede site na iCloud ndabere (iOS 9 iCloud ndabere na faịlụ a na-anaghị akwado ma ugbu a. The akwado version abịa n'oge na-adịghị).
iOS 9 / iPhone 6s (Plus) Text Ozi Iweghachite
3 ụzọ iji weghachite ehichapụ ozi ederede na iMessages si iPhone
Akwado multiple ngwaọrụ: Ọ na-akwado niile iPhones, iPad na iPod aka, gụnyere iPhone 6s (Plus), iPad Pro na iOS 9
3 mgbake ụdịdị: iṅomi gị iOS ngwaọrụ, adịrị gị iTunes na iCloud backups.
Zọpụta ozi dị ka ị na-amasị: Kpọmkwem-azụ SMS gị iPhone dị ka iso, ma ọ bụ chekwaa ya na kọmputa gị dị ka a ndabere.
Nhọrọ preview & mgbake: ịhụchalụ hụrụ ozi na-agbake ihe ọ bụla ihe ị chọrọ.
3 Solutions iji weghachite ehichapụ ozi ederede site na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c / 4s / 4 / 3GS
Wondershare Dr.Fone Maka iOS-enye gị 3 mgbake ụdịdị iji weghachite ehichapụ odide on iPhone. Ị dị nnọọ mkpa ibudata Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na kọmputa gị na-eso otu n'ime ndị na-esonụ ngwọta ịmụta otú weghachite ehichapụ ozi ederede site na iphone.
1: Naghachi SMS si iPhone
2: Naghachi SMS si iTunes
3: Naghachi SMS si iCloud
Ngwọta 1: Kpọmkwem naghachi ehichapụ ozi ederede site na iPhone
Nzọụkwụ 1 Find ehichapụ ozi na iPhone
Ka malitere, jikọọ gị iPhone gị na kọmputa. Mgbe ahụ na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS na pịa na Malite iṅomi button-idem ke window ike iṅomi gị iPhone. Akwụpụla gị iPhone n'oge scanning usoro.
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake iPhone ozi ederede
Mgbe iṅomi zuru ezu, ị nwere ike họrọ Ozi na Message Mgbakwụnye ka ịhụchalụ niile nke hụrụ ozi ederede otu otu. Mgbe ahụ selectively naghachi ihe dị gị mkpa. Mgbe ịpị 'Naghachi', a mmapụta ga-arịọ gị naghachi ngwaọrụ gị ma ọ bụ kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ 'Naghachi ka Ngwaọrụ', mgbe ahụ, natara ozi ederede ga-azọpụta gị iPhone. Ọzọkwa, ị nwere ike ịzọpụta ha kọmputa gị dị ka nke ọma. E wezụga na, na-ehichapụ iMessage ọdịnaya pụrụ ịchọta kwa, gụnyere ederede, Emoji na Mgbakwụnye.
Ngwọta 2: Naghachi ehichapụ iPhone Ozi site iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1 iṅomi wepụ gị iTunes ndabere
Họrọ mgbake mode nke naputa site na iTunes ndabere File mbụ. Wee họrọ nkwado ndabere na mpaghara ị chọrọ iji naghachi ozi ederede site na ndepụta ahụ, na pịa na Malite iṅomi button wepụ nkwado ndabere na mpaghara ọdịnaya. All ndabere faịlụ ẹdude na kọmputa gị dị maka mmịpụta.
Nzọụkwụ 2 Preview na weghachite ozi n'ihi na iPhone
Doppler na-ewe gị ole na ole sekọnd. Mgbe ya, ị nwere ike ịhụchalụ na-agbake ozi ọ bụla na menu nke Ozi na Message Mgbakwụnye. Mgbe click 'Naghachi', ị ga-jụrụ naghachi ngwaọrụ gị ma ọ bụ kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-gị iPhone jikọọ kọmputa gị site na eriri USB, mgbe ahụ, ị na-ahọrọ 'Naghachi ka Ngwaọrụ' ga-azọpụta ozi gị iPhone. Bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ, ozi ederede ga-azọpụta gị na kọmputa.
Ngwọta 3: Weghachi ehichapụ iPhone Ozi site iCloud ndabere
Nzọụkwụ 1 Download ma wepụ gị iCloud ndabere
Gbanwee na mgbake mode nke naputa site na iCloud ndabere File n'elu nke usoro ihe omume si window.
Mgbe ahụ abanye na gị iCloud akaụntụ. Mgbe ahụ, na-ahọrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ịchọrọ ibudata ya. Ọhụrụ mmapụta, ego 'ozi' na 'ozi Mgbakwụnye' ibudata. Site n'ime nke a, nanị ihe ọ download ozi ederede na Mgbakwụnye, na-azọpụta gị oge.
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake iPhone ozi
Ozugbo Doppler akwụsị, ị nwere ike ihuchalu niile ozi ederede na iCloud ndabere faịlụ. Họrọ ozi ederede gị mkpa ma pịa 'Naghachi'. Ma 'Naghachi ka Ngwaọrụ' na 'Naghachi ka Computer' dị. M atụ aro ka ị jikọọ gị iPhone na kọmputa gị site na eriri USB na-ahọrọ 'Naghachi ka Ngwaọrụ'. Ọ bụ ihe adaba n'ihi na ị na-ele ozi na gị iPhone karịa na kọmputa gị.
Ihe banyere Wondershare Dr.Fone maka iOS
iPad Pro, niile iPad Air nsụgharị, niile iPad Obere nsụgharị, iPad na Retina ngosi, The ọhụrụ iPad, iPad 2, iPad 1
iPod aka 5, iPod aka 4
Text ọdịnaya: Ndi ana-akpo, Ozi, Kpọọ akụkọ ihe mere, Kalinda, Edeturu, na-echetara, WahtsApp History, Facebook ozi, Safari ibe edokọbara, App Documents
Media ọdịnaya: Igwefoto Roll, Photo Library, Photo Stream, Voice memos, Message Mgbakwụnye, WhatsApp Mgbakwụnye, oziolu, App Photos, App Videos
Atụmatụ banyere iPhone Group Izi ozi
Otú e si enyere / gbanyụọ Group Izi ozi na iPhone
Group Izi ozi na ihe iPhone na-adịkarị zitere site iMessage ma ọ bụrụ na niile nnata nyeere ndị iMessage. Bụrụ na ọ bụghị, ìgwè ahụ na-akparịta ụka ga-eziga ka MMS, ọbụna mgbe ọdịnaya bụ ederede naanị. Ọ bụ nnọọ mfe aka ma ọ bụ gbanyụọ Group Izi ozi na iPhone.
Dị nnọọ aga Ntọala> Ozi> Pịa iji NA / Gbanyụọ Group Izi ozi. Ị nwere ike iwepu Group Izi ozi na Ntọala> Ozi.
Olee otú ịhapụ otu nkata na ihe iPhone
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka a nsogbu site na-abaghị uru ìgwè ozi, i nwere ike mfe ahapụ otu ìgwè ozi na gị iPhone. Mee ya dị ka ndị.
1. Gaa "Mwube", mgbe ahụ, họrọ "Ozi".
2. Ị pụrụ ịhụ "Group Izi ozi" n'okpuru "SMS / MMS" otu n'ebe ahụ. Gbanyụọ "Group Izi ozi."
3. Hichapụ otu ìgwè ozi nke ị ama gara aga anọwo na akụkụ site mmeghe na Ozi ngwa na gị iPhone. Kpatụ mkparịta ụka ozugbo na ahụ "Dezie" na akara ngosi na n'elu nri akuku nke ihuenyo.
4. Kpatụ "Clear All" button na n'elu n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo wee "Doro Anya Ihe" ke mmapụta window ka ihichapụ ha dum ozi. Nke a edinam bụ na-adịgide adịgide na-apụghị nwesịrị.
Hot Isiokwu maka iOS 9 Upgrading I nwere ike
iOS 9 Data Recovery: Naghachi Lost iOS 9 Data
Update iOS 9 na iPhone / iPad / iPod aka
Ndabere iPhone tupu iOS 9 ọjọọ
iOS 9 ọjọọ White Apple Logo
Adị n'elu Your iPhone na-agba ọsọ iOS 9 Faster
Nyefee Old iPhone ka iPhone 6s (Plus)
Olee otú Naghachi ehichapụ Video on iPhone
Idozi GPS Nsogbu on iPhone
All na mkpa ka ị mara banyere iPhone ekpo oke ọkụ na ụzọ idozi nke a nke
Gịnị mere iPhone 6 na iPhone 6 gbakwunyere batrị uzo mere ngwa ngwa? Olee otú idozi ya?
> Resource> iPhone> Olee naghachi ehichapụ ozi ederede site na iPhone